Zava-misy, tarehimarika ary antontanisa | Martech Zone
Ny stereotype tsy azon'ny zokiolona ampiasaina, tsy azony, na tsy te handany fotoana amin'ny Internet dia miparitaka be eo amin'ny fiarahamonintsika. Na izany aza, mifototra amin'ny zava-misy ve izany? Marina fa manjaka amin'ny fampiasana Internet ny Millennial, saingy misy vitsy an'izany Baby Boomers amin'ny tranonkala manerantany?
Tsy dia mieritreritra an'izany izahay ary efa hanaporofo izany. Ny zokiolona dia manaiky sy mampiasa teknolojia maoderina amin'ny fitomboan'ny isan'ny ankehitriny. Tsapan'izy ireo ny tombony azo avy amin'ny fianarana mampiasa solosaina finday, finday avo lenta, ary na dab aza amin'ny zava-misy virtoaly.
Ireto misy zava-misy izay mampiseho aminao ny zava-misy momba ny fomba fampiasan'ny zokiolona ankehitriny amin'ny Internet.
Firy ary firy
Ny isan'ny zokiolona amin'ny Internet dia tena avo tokoa. Raha ny tena izy, farafaharatsiny 70% ny olona 65 taona no ho miakatra mandany fotoana amin'ny Internet isan'andro.
Amin'ny salan'isa, ny taranaka zokinjokiny dia mandany mandritra ny 27 ora amin'ny Internet isan-kerinandro.
Medalerthelp.org, Ny tranonkala antitra sy izao tontolo izao
Ambonin'izany, ireo zokiolona dia nahatsapa ny tombontsoa lehibe indrindra amin'ny Internet — fidirana maimaimpoana amin'ny fampahalalana tsy voafetra! Noho izany, ny fikarohana dia mampiseho fa farafaharatsiny 82% ny zokiolona mampiasa motera fikarohana hahita vaovao amin'ny lohahevitra mahaliana azy ireo.
Ny ankamaroan'ny be taona dia manamarina ny toetrandro
Ny iray amin'ireo antony lehibe andehanan'ny zokiolona amin'ny Internet dia ny fizahana ny toetr'andro (manodidina ny 66%). Zava-misy fanta-daza fa rehefa mihalehibe ny fahatsapanao ny fahatsapanao ny fiovan'ny toetr'andro, noho izany ny fizahana azy amin'ny Internet dia fomba tsara hijanonana hatrany.
Na izany aza, mampiasa Internet amin'ny zavatra maro hafa koa ny be taona. Ny sasany amin'ireo fahita indrindra dia ny fiantsenana, fampahalalana momba ny sakafo, lalao, tapakila ary fihenam-bidy, ary antony maro hafa.
Miresaka amin'ny Internet ve ny zokiolona?
Ny stereotype iray hafa anananay momba ny zokiolona manodidina antsika dia ny mbola iankinan'izy ireo amin'ny laharana an-tanety hifandraisana amin'ireo namany sy fianakaviany. Na dia marina ho an'ny sasany aza izany dia tsy dia be loatra araka ny fiheveran'ny sasany azy.
Ny fitaovana telo lehibe amin'ny fifandraisana amin'ny Internet dia ny mailaka, ny fampiharana hafatra, ary ny sehatra media sosialy. Manodidina ny 75% ny olon-dehibe mifampiresaka amin'ireo olona ao amin'ny fianakaviany amin'ny fampiasana fampiasa hafatra iray farafaharatsiny. Ny roa mahazatra indrindra dia ny FaceTime sy Skype satria ireo dia manamora ny fifandraisana amin'ny horonan-tsary sy fandefasana sary.
Iza amin'ireo fitaovana ampiasaina be indrindra?
Na dia efa lasa lavitra aza isika tamin'ny fanatonana ny be antitra sy ny haitao dia mbola misy toerana azo hatsaraina. Ohatra, ny telefaona finday mahazatra dia matetika kokoa eo amin'ireo taranaka taloha raha ampitahaina amin'ny finday avo lenta. Arakaraky ny haavon'ny halehiben'ny taona no mahabe ny elanelana misy eo amin'ny fampiasana telefaona finday sy finday avo lenta.
Ohatra, 95% amin'ireo olona 65-69 taona no mampiasa telefaona finday, fa 59% kosa mampiasa finday avo lenta. Na izany aza, 58% amin'ireo izay mihoatra ny 80 taona no mampiasa finday, fa 17% ihany no mampiasa finday avo lenta. Toa mbola mampatahotra ny zokiolona ny finday avo lenta, saingy azo antoka fa hiova tsy ho ela ireo fironana ireo.
Ireto isa ireto dia antenaina hitombo amin'ny ho avy
Ny tarehimarika mifandraika amin'ny Internet sy ny be antitra dia tena mamporisika sahady. Na izany aza, antenaina izy ireo fa hitombo haingana kokoa atsy ho atsy. Rehefa mihantitra ireo taranaka tanora izay manana fibaikoana tsara ny teknolojia maoderina dia hitombo koa ny isan-jaton'ny zokiolona mahay mamaky teny amin'ny lafiny teknolojia.
Raha te hahalala bebe kokoa an'ity lohahevitra ity dia zahao ity sary manaraka noforonin'i Medalerthelp.
Tags: fampiasana Internetstatistikan'ny telefaona findayfampiasana findayolom-pirenena zokiolona
Nikola Djordjevic, MD, Lehiben'ny atiny ao amin'ny MedAlertHelp.org. Avy any Serbia, Nikola dia dokotera mpitsabo izay nanomboka ity tetik'asa ity tamin'ny taona 2018 noho ny fitiavany manampy ny hafa, indrindra ireo zokiolona. Ankoatra ny fandinihana ireo rafitra fanairana ara-pahasalamana dia manoratra bilaogy natokana ho an'ny fahasalamana, fahanterana, fisotroan-dronono ary lohahevitra hafa mifandraika amin'ny zokiolona koa izy.